ईचर: अनुप्रयोग तपाईले आफ्नो रास्पबेरी पाईको लागि एक एसडीमा अपरेटिंग प्रणाली रेकर्ड गर्न आवश्यक छ नि: शुल्क हार्डवेयर
ईचर: अनुप्रयोग तपाईले आफ्नो रास्पबेरी पाईको लागि एक एसडीमा अपरेटिंग सिस्टम रेकर्ड गर्नु पर्छ
जब तपाईं संस्करण को एक खरीद गर्नुहुन्छ रास्पबेरी पाई बोर्ड, तपाइँले गर्न सक्नु भएको एउटा SD SD मेमोरी कार्ड तयार पार्नु हो जुन यस SBC बोर्डसँग मिल्दो एउटा बुटेबल अपरेटिंग प्रणाली छ। यो सम्भव हुनको लागि त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन्, यद्यपि एक सबैभन्दा लोकप्रिय हो र जुन म सिफारिस गर्दछु ईचर वा balenaEtcher। यसको साथ तपाईंसँग एसएसमा आफ्नो ओएस तयार गर्न आवश्यक सबै कुरा हुनेछ एक धेरै सहज र छिटो तरिकामा।
तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि त्यहाँ ठूलो संख्या छ अपरेटिंग सिस्टम जुन पहिले नै समर्थित छ रास्पबेरी पाई बोर्डको साथ। धेरै GNU / Linux वितरणले पहिले नै एआरएमलाई समर्थन गर्दछ र पाईमा राम्रोसँग काम गर्न सक्दछ। तपाईंसँग अन्य खुला स्रोत अपरेटिंग प्रणालीहरू छन् जुन लिनक्स कर्नेलमा आधारित छैनन् र रस्बेरी पाईका लागि विशेष छन्, जस्तै RISC OS, RaspBSD, इत्यादि। तपाईले विशिष्ट प्रयोगको लागि केहि फेला पार्न सक्नुहुन्छ जस्तै विन्डोज आइओटी, ओपनईएलसी मिडिया सेन्टर सेटअप गर्न, रेट्रोपी रेट्रो खेलहरूको लागि रेट्रोपी, इत्यादि।
2 ईचर भनेको के हो?
3 चरणहरू balenaEtcher प्रयोग गर्नका लागि
ठीक छ, जे पनि अपरेटिंग प्रणाली तपाईंले छनौट गर्नुभयो, र ती सबैमा उही एसडीमा, एलवा तपाइँले के गर्नुपर्दछ तपाईंको रास्पबेरी पाई चलाउनको लागि हो:
तपाईंको अपरेटिंग प्रणाली डाउनलोड गर्नुहोस्। लिंकमा मैले तपाईंलाई यसका अधिकारीहरू छोडिदिएको छु रास्पबेरी Pi फाउंडेशन, तर त्यहाँ अन्य स्रोतहरूमा धेरै छन्।
BalenaEtcher डाउनलोड गर्नुहोस् बाट आधिकारिक वेबसाइट परियोजना को।
स्थापना गर्नुहोस् तपाईंको प्रणालीमा balenaEtcher।
तपाईंको OS छवि पास गर्न ईचर प्रयोग गर्नुहोस् एसडी कार्डमा ताकि तपाईं पाइ बाट बुट गर्न सक्नुहुन्छ।
अवश्य पनि, यसको लागि तपाइँलाई एक कार्ड रिडरको साथ पीसी चाहिन्छ, एसडी आफैं (रास्पबेरी पाईको मामलामा यो माइक्रोएसडी हुनेछ) र एसबीसी बोर्ड।
ईचर भनेको के हो?
Balena यो सफ्टवेयर को रूपमा लोकप्रिय भनेर विकसित भयो Etcher। यद्यपि त्यो नाम हो जुन यो द्वारा यसलाई ज्ञात छ, यो भन्नु पर्दछ कि यो सुरूमै त्यो हो भनेर भनिएको थियो। तर यो २०१ 2018 मा पुनःनामाकरण गरियो जब resin.io ले यसको नामलाई balena.io मा परिवर्तन गर्‍यो।
यो Apache २.० लाइसेन्स अन्तर्गत एक निःशुल्क र खुला स्रोत कार्यक्रम हो। गर्न प्रयोग गरियो मिडियामा छवि फाइलहरू लेख्नुहोस् भण्डारण। ती आईएसओ वा आईएमजी जस्ता अपरेटिंग प्रणालीहरूको छविहरू हुन् र प्रयोग गरिएको मिडिया सामान्यतया एसडी मेमोरी कार्ड हुन्, यद्यपि यसले युएसबी फ्ल्यास मेमोरी पनि समर्थन गर्दछ। त्यो हो, तपाइँ यसलाई तपाइँको रास्पीको लागि एसडीको लागि मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तर यूएसबी लाइभ सिर्जना गर्न, विन्डोज १० स्थापना स्थापना, आदि तयार गर्न आदि।
थप रूपमा, यो एक बहु प्लेटफर्म सफ्टवेयर हो, किनकि यसले दुबै माईक्रोसफ्ट अपरेटिंग सिस्टमहरूमा काम गर्न सक्दछ विन्डोज, एप्पल macOS र GNU / लिनक्स.
उनको बीचमा सुविधाहरु सब भन्दा प्रख्यात छन्:
स्वचालित रूपमा मिडिया पत्ता लगाउनुहोस् जुनमा तपाइँ अपरेटिंग प्रणाली छवि माउन्ट गर्नुहोस्। तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि ती USB सम्झनाहरू वा SD कार्ड हुन सक्छन् जुन तपाईंले उपकरणमा घुसाउनुभएको छ।
हार्ड ड्राइव छनौट बिरूद्ध बचाउँछ। त्यो हो, तपाईंले गल्ती गर्ने र तपाईंको हार्ड ड्राइभ छनौट गर्ने र यसलाई लोड गर्ने बारे अन्य प्रोग्रामहरू जस्तै चिन्ता लिनुपर्दैन।
सबै गर्नुहोस् प्रक्रिया स्वचालित रूपमा एकचोटि सुरु भयो, तपाईले हस्तक्षेप नगरीकन। साथै, यदि तपाई बिभिन्न मिडियामा धेरै प्रतिलिपिहरू बनाउन चाहानुहुन्छ, उदाहरणका लागि धेरै SBC को साथ क्लासको लागि, पहिलो पटक समाप्त भएपछि यसले तपाईंलाई छिटो समान प्रक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ।
भविष्यमा, विकासकर्ताहरूले पनि यसको लागि अनुकूलताको लागि समर्थन थप्न चाहान्छन् लगातार भण्डारण। त्यो हो, जब तपाईं एक GNU / लिनक्स डिस्ट्रोको साथ एक मध्यम सिर्जना गर्नुहुन्छ, तपाईं SD वा USB मा गरिएका परिवर्तनहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यसले बीचमा विभाजन वा ठाउँ सिर्जना गर्दछ जहाँ सबै बचत हुन्छ। सामान्यतया, यससँग पहिले नै मिल्दो अन्य कार्यक्रमहरूले तपाईंलाई त्यो विभाजनको आकार छनौट गर्न अनुमति दिन्छ।
चरणहरू balenaEtcher प्रयोग गर्नका लागि
अब जब तपाइँलाई यो सफ्टवेयरको विवरण थाहा छ, हामी हेरौं चरणहरू यसलाई प्रयोग गर्न। तपाईले देख्नुहुनेछ कि यो एकदम सरल छ:
डाउनलोड गर्नुहोस् बैलेना ईचर संस्करणमा तपाईंलाई आवश्यक छ:
विन्डोजको लागि: तपाईसँग दुई विकल्पहरू छन्, एउटा यो तपाईको प्रणालीमा स्थापना गर्न एक्से एक्सेप्ट छ। अर्को पोर्टेबल हो जुन तपाईंलाई स्थापना गर्न आवश्यक पर्दैन, तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, अनजिप गर्नुहोस् र तपाईं यसलाई सिधा चलाउन सक्नुहुनेछ।
म्याकोसका लागि: त्यहाँ एक मात्र विकल्प छ, एप्पल प्रणाली कार्यान्वयन योग्य जुन तपाइँ सजिलैसँग स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
लिनक्स को लागी: माथिको जस्तै, त्यहाँ एक मात्र विकल्प छ। यो एक विश्वव्यापी AppImage प्रकार प्याकेज हो, त्यसैले स्थापना कुनै वितरणको लागि काम गर्दछ र सजिलैसँग भयो। तपाईंले भर्खरै यसलाई चलाउनु पर्छ र प्रक्रिया सुरू हुन्छ।
अब समय छ स्थापना गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि तपाईले रोज्नु भएको प्याकेज चलाउनुहोस्। पोर्टेबल बाहेक जसलाई यसको आवश्यक छैन, मैले पहिले नै भनें। एक पटक स्थापना समाप्त भएपछि तपाईं सुरु गर्न सक्नुहुनेछ।
अनुप्रयोग चलाउनुहोस् तपाईंको ओएसको उपलब्ध अनुप्रयोगहरूको बीचमा यसको खोजी गर्दै।
यसको ग्राफिकल ईन्टरफेस धेरै सरल छ। यसको कुनै घाटा छैन। तपाईंले केवल तीन चरणहरू गर्नुपर्दछ:
छवि पहिले चयन गर्नुहोस्। फाइल ब्राउजरबाट तपाईं जान सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईंले छान्नुभएको अपरेटिंग सिस्टमको छवि डाउनलोड भयो: .iso वा .img।
अर्को चरण भनेको SD कार्ड वा USB फ्ल्यास ड्राइभ चयन गर्नु हो जहाँ तपाईं यसलाई लोड गर्न चाहानुहुन्छ।
त्यसपछि फ्ल्यास फ्ल्याश गर्नुहोस्, अर्थात् छनौट गरिएको माध्यमको प्रतिलिपि गर्नुहोस् र प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसैले बुट गर्न सकिन्छ।
प्रक्रिया समाप्त हुनका लागि कुर्नुहोस् र त्यसपछि, यदि तपाईंले एक भन्दा बढि माध्यमको प्रतिलिपि गर्नुहुन्न भने, तपाईं अझै बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि तपाईं हुनेछ तयार छ यसको मतलब यो कम्प्युटरमा वा तपाईंको रास्पबेरी पाईमा परीक्षण गर्ने…।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » रास्पबेरी Pi » ईचर: अनुप्रयोग तपाईले आफ्नो रास्पबेरी पाईको लागि एक एसडीमा अपरेटिंग सिस्टम रेकर्ड गर्नु पर्छ
जुआन कार्लोस फिशर भन्यो
लिंकमा https://www.balena.io/etcher/ रास्पबेरी को लागि संस्करण कहाँ छ?
जुआन कार्लोस फिशरलाई जवाफ दिनुहोस्
जाइरोस्कोप: सबै कुरा तपाईलाई थाहा पाउनु पर्छ
एटिटिनी :85: एक माइक्रोकन्ट्रोलर जसले धेरै खेल दिन्छ ...